हुनेखानेलाई लकडाउन दशै तिहार, दुःख गरी छाक टार्नेलाई गलपासो – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNewsहुनेखानेलाई लकडाउन दशै तिहार, दुःख गरी छाक टार्नेलाई गलपासो
हुनेखानेलाई लकडाउन दशै तिहार, दुःख गरी छाक टार्नेलाई गलपासो
April 3, 2020 Rohit Basnet News, Pokhara 0
चैत्र २१ पोखरा : चैतमासको टनटलापुरे घाम शोफामा यसो आँखा लगाएको रहेछु कता कता कानमा ”ताजा साग आयो, ताजा साग आयो”… भन्ने बोली सुनिन्छ’ झटपट आँखा घडी तिर गयो दिनको १ बज्नै लागेको रहेछ । उठेर बाटो तिर हेरे बाटो सुनसान थियो । आँखा यता उता डुलाए अलि पर एक अधबैंसे महिला डोको भरी साग लिएर घरहरुको गेट गेटमा बोल्दै हिडेकी रहीछन् ।बेलुकाको लागी तरकारी छैन एक मुठा साग म पनि राख्न पर्छकी सोच्दै बाहीर निस्कीए करीव १०,१२ घर अलि पुगीसकेकी रहीछन ति महिला…..
मुखमा माक्स लगाएर म पनि तेतै लागे । नजिकै के पुगेको थिए एउटा गेट भित्रबाट आवाज आयो ए दीदी कुन ठाउँको साग हो ? महिला, मालेपाटनको हो ताजा छ राख्नुस,
कति पैसा हो ? ५० रुपैया
महँङगो भयो यस्तो जावो एक मुठा सागलाई ५० ………. ३० मा पाईन्छ, भो भो मेरो गेटतिर नआउ.. उता जाउ .. म राख्दीन ………….
कठै कति टर्रो……बोली । विचारा कचप्प भारीले च्याँपेको छ चैतमासको घाम.. पसिनाले लिर्थुक भिजेको मनिलो अनुहार वनाउँदै महिला बाटो तिर फर्कीन्छीन् ।
यहाँ कतिपय हुनेखानेलाई लकडाउन दशै तिहार रमाईलो बिदाजस्तो भएको छ तर दिनभर दुःख गरेर छाक टार्नेहरुलाई गलपासो भएको छ ।
यतिबेला देशमा लकडाउन चलिरहेको छ । लकडाउनसँगै दैनिक परिश्रम गरेर जिन्दगी चलाउनेहरुको चुलो निभ्नै आँटेको छ । कोरोनाको चिन्ताले भन्दा धेरै भोकको चिन्ताले सताउन थालेको छ । स्कुल बिदा छ, बच्चालाई विहान बेलुका छाक टार्न मात्र होइन खाजाको पनि जोहो गर्नुपर्छ । जब बोराको चामल पिँधमा पुग्छ । अनि मन मा अनेक किसिमका तर्क आउन थाल्छ । रात भरी निद्रा लाग्दीन ।
श्रीमानले अर्कै विहे गरे पछी पाल्पाकी कमला थापा ३ बच्चालाइ काखी च्यापेर पोखरा शहर पसिन पोखराको मासवारमा विगत ८ वर्षदेखि डोकोमा साग बेचेर जीविका गुजारी रहेकी कमलालाई यतिबेला लकडाउनको पीडाले भन्दा भोकको पीडाले बढी पिरोलीरहेको छ । कमला भन्छीन ‘दिनभरी साग तथा तरकारी बेचेको खर्चले घर चलाउँथेँ । अहिले साग तथा तरकारी बेच्न जान पाएको छैन । यता आफुलाइ रोग लाग्ला भन्ने डर छ उता प्रहरीको गाली सुन्नु पर्छ । कोठामा चामल पनि सकिन लागेको छ । भुटन सकिएको पनि आज चार दिन भै सक्यो । सधै विहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले मात्रै सताउन थालेको छ । सरकारले म जस्तै दुखि र असायलाई
राहात दिने भनेको छ रे .. फेरी चिनेजानेको आफ्नो मान्छे चाहिन्छ होला ? हामीलाई के दिन्थेर दिए त सरकारको जय जय हुन्थ्यो ।
हामी त २, ४ छाक खान नपाए पनि बाँचीएला तर छोराछोरीको बिजोग हुने भो । अघाएको पेट र भोको पेटमा धेरै फरक पर्छ बाबु उनले म तिर हेरेर भावुक वन्दै भनिन् ।
लकडाउनले कमला जस्ता धेरै मान्छे थला परेका छन् । उनीहरुको आशा भनेको अव सरकारको राहत मात्रै हो ।
यति बेला पोखरा महानगरपालिकाले नगरभित्रका विपन्न र ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई राहत बाँड्ने तयारीमा छ । महानगरपालिकाले करिब साढे २ करोड रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गरेको र सोही कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गरेर खाद्यान्न उपलब्ध गराइने नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिएका थिए ।
पोखरा महानगरले २ करोड तथा कर्मचारीको तर्फबाट संकलित ४८ लाख ५० हजार समेत गरेर २ करोड ४८ लाख ५० हजारको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको छ भनेर प्रमुख जिसीले भनेका थिए ।
महानगरपालिका भित्र बसोबास गर्दै आएका असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिहरु खाना, खाजा नपाएर समस्यामा छन् । ‘विपन्न वर्गको पहिचान गरेर सबैलाई समान प्रकारको राहत उपलब्ध गराउन यस्तो मापदण्ड पारित गरिएको हो ।
त्यस्तै, आम्दानीको स्थायी स्रोत नभएका, दैनिक गुजारा गर्न धौ(धौ भएका र सम्बन्धित वडाले अति विपन्न भनी प्रमाणित गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई राहत वितरण गरिने महानगरपालिकाले जनाएको थियो ।